Sidee si ay u gudbiyaan Podcasts ka Lugood si iPhone
> Resource > Lugood > Video Transfer / Audio Podcasts ka Lugood si iPhone (5s iPhone mid)
Waxaan leeyahay dhowr podcasts soo bixi maktabadda Lugood iyo jeclaan lahaa in iyaga lagu wareejiyo si aan iPhone. Tani ma suurto gal ah? Waxaan ku xiran my iPhone la Lugood, oo la doortay "nidaameed Podcasts". Si kastaba ha ahaatee waxba ma dhicin,. Weli Anigu ma heli karo Podcasts synced in aan iPhone. No fariin qalad iyo digniin!
Guud ahaan, samaysaan sida waxa user kor ku sameeyey, oo aad ka Lugood si iPhone wareejin karaan Podcasts. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan mar walba kiiska. Ugu apple.com, waxa kale oo aad ka heli kartaa info ah in qaar ka mid ah Podcasts video lagu ciyaari karo si fiican Lugood, laakiin aan loo gudbin karaa iPhone, iPad, iPod ama taabashada ah ee loo maqli karo sababta oo ah arrin incompatibility format. Xaaladdan oo kale, si loo hubiyo in aad ka Lugood gudbin doonaa Podcasts si iPhone si guul ah, waa inaad isku daydaa Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Labada iyaga ha aad ka heli video iyo maqal ah Podcasts ka Lugood si iPhone si fudud oo aan wiil arrinta qaab!
Download TunesGo Wondershare in Podcasts ka Lugood wareejiyo iPhone!
Download version sax ah oo ku xidh on your computer. In socda, waxaan diirada doonaa sida video iyo Podcasts audio si ay u gudbiyaan ka Lugood si iPhone on Windows PC la Wondershare TunesGo (Windows). Dadka isticmaala Mac, fadlan isku day version Mac ah. Software Tani waa fududahay in la isticmaalo. Isla marka aad u abuurtaan, waxaad ogaan doontaa sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1. Connect iPhone la PC via cable USB ah
Connect aad iPhone aad PC Windows via USB ah cable iPhone. Burcad Wondershare TunesGo (Windows) oo aqoonsan doonaa iPhone. Ka dibna waxaad arki kartaa in Wondershare TunesGo uu furmo suuqa hoose, aad info iPhone bandhigo. Wondershare TunesGo si buuxda u taageersan iPhone kasta oo siday macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9.
Tallaabada 2. Transfer Podcasts ka Lugood si iPhone
In uu furmo suuqa hoose, guji Media dhanka bidix. Laga soo bilaabo suuqa kala cusub wadahadal, waxaad ka arki kartaa "Podcasts" dusheeda. Guji "Podcasts" si aad u aragto video oo dhan iyo Podcasts audio aad iPhone. Fiiri "Add" on sare ee daaqadda? Waxaa Riix dooro "Add File" ee liiska hoos-hoos u.
In ka pop-up cusub, guji "Music" ee bidix> double-riix "Lugood" ee xaq u> double-riix "Lugood Media"> double-riix "Podcasts"> dooro video doonayo ama Podcasts audio oo guji "Open ". Ka dibna waxaad arki kartaa in Podcasts ka Lugood wareejiyo aad iPhone. Hadday Yihiin kuwaasu Podcasts aad wareejinta ahayn kuwo la socon kara iPhone, dhakhso ah ka muuqan doontaa, waydiinaya inaad iyaga loogu badalo. Just guji Beddelaan si loogu badalo Podcasts si iPhone qaabab si buuxda u taageeray u wareejinta.
Eeg Sidee si ay u gudbiyaan Podcasts ka Folder Lugood Media ah in iPhone
Isku day Wondershare Podcasts Transfer TunesGo ka Lugood si iPhone!